hataru/हटारु: कमरेड हिक्मत गोठालो
नेपालमा माओवादी आगो दन्केको बेला दांगको खरबारीमा पसेका थिए, ठूलाबा । र, उदयजीले जानकारी गराएका थिए, ‘ठूलाबा त भूमिगत हुनुभयो ।’
जनयुद्ध उकालिदै गरेको यामको एउटा तिहार । जुन बेला सहर र सदरमुकामबाहेक सिंगै नेपाल माओवादीमय थियो । त्यै तिहारमा उदयजीसित पुगेका थियौं, ठूलाबाको घरमा । ठूलाबा कार्यक्षेत्र जाने हतारमा थिए । हतारमै संचोबेसंचोका दुईचार बात भएथे । घरले जा र बनले आ भन्ने उमेरमा पनि ठूलाबाको अनुहारमा फुलेको जोश देखेर अचम्मित थियौँ । ठूलाबाको अनुहारमा सामान्य छनक पनि थिएन कि जनयुद्ध यसरी दुई थान प्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्रीसँग साटिनेछ । र, जनयुद्धको पनि यसअघिका नेपाली आन्दोलनकै हविगत हुनेछ ।
शान्तिप्रक्रियापछि बलिदान गरेका र इमान्दार माओवादी नेता र कार्यकर्ता घर न घाटमा थिए । अरबका खाडीमा जानेका लाम थियो । तर, ठूलाबाको उमेरमा भने भारतमा कुल्ली काम गर्न जाने बाध्यतासमेत असामान्य थियो ।
‘उही झोला, उही लुगामा र उही अनुहारमा घर फर्कनुभएको थियो, ठूलाबा भत्किएका सपना बोकेर । ठूलाबाका नेता दांगका जिम्दारलाई टक्कर दिएका थिए । तर ठूलाबा झन दुब्लाउनुभएको थियो । घरमा रोजीरोटीको समस्या हिजोभन्दा झन चुलिएको थियो । कहाँ जानु, उही पुरानै ठाउँ जानुभयो,’ उदयजीको कुराले फेरि दुखी बनायो ।
१० वर्षपछि ठूलाबा भारतको पञ्जावस्थित बठिण्डा फर्किए जहाँ उनले ढुंगा मन्साएर नेपाल फर्केका थिए जनयुद्धमा होमिन । र, ६० वर्षीय पूर्णबहादुर घर्ती मगर भएथे कमरेड हिक्मत गोठालो । जनयुद्धको समाप्तीपछि प्रचण्ड र बाबुराम भटराई प्रधानमन्त्री बने । कृष्णबहादुर महरासहित केही थान माओवादी नेता मन्त्री बने । माओवादी मूल नेतृत्व र नेता रुपान्तरित भए हिजोका शासकका नयाँ संस्करणमा । तर, हजारौं कार्यकर्ता र सयौं माओवादी नेताजस्तै कमरेड गोठालो भने फेरि बठिण्डा पुगे । र, कमरेड हिक्मत गोठालो फेरि पूर्णबहादुर घर्ती मगर भए ।
काठमाडौंमा छाप्नेआग्रहसहित इमेलमा पठाए ।
ठूलाबाको लेख पढेँः
जनताले भन्थे– माओवादी कार्यकर्ताले हामै्र लागि दुःख उठाएका छन् । त्यसैले मुक्तिदाता मानेर आफ्नै गा“स खुवाए । आफ्नै ओछ्यानमा सुुताए । र, दुश्मनबाट जोगाए । कार्यकर्ताले भन्थे– नेता त विचार र योजना हो । नेताबिना हामी त दिशाविहीन भएर सकिन्छौ“ । नेताले भन्थे– कार्यकर्ता त क्रान्तिका पेच र किला हुन् ।
...तर अहिले ? नेताका आँखामा कार्यकर्ता घा“डो र कार्यकर्ताका आँखामा नेता धोकेबाज र बेइमान । जनताका आँखामा ढाँट । कारणः नेता जनताकोमा जाँदैनन्, स्वदेशी या विदेशी प्रभुकोमा जान्छन् । त्यसैले आकाशबेलीझै“ जेलिएको छ अविश्वास ।
हजारौं कार्यकर्ता र जनता भविष्यको खोजीमा छट्पटाइरहेछन् जो हिजो नेतृत्वको निर्देशनमा मर्न तम्सिएका थिए । जिन्दगीका सबै खुसी चढाएका थिए । र, शरीरका अंग चढाएका थिए । भन्थ्यौं, एकपटक हतियार उठाएपछि अन्त्यसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्नु जनताप्रति अपराध हो । भन्थ्यौं– लडाईं आंशिक सुधारका लागि सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न दिने छैनौ“ । र, परिवार र नातागोताका इच्छाविपरीत कुम्लाकुम्ली बोकेर चे ग्वेभाराझै“ संसार जित्ने सपथ खाएर हिंडेका थियौ“– ‘हामी मारिन सक्छौ“ र पार्टी पूरै सहिद बन्न सक्छ । तर, विजययात्रा रोकिने छैन ।’
ओ कमरेड ! भन, क्रान्ति जारी छ कि अन्त्य भयो ? जारी छ भने हामी किन बेकम्मा बनाइएका छौ“ ? अन्त्य भएको हो भने के पाए नेपाली जनताले ? जबाफ देऊ, मुक्तियुद्धमा आहुति दिने ती वीर सहिद हुन् कि मरेका मान्छे ? घाइते सा“च्चै जनक्रान्तिका योद्धा हुन् कि अपाङ्ग मात्र ? यी तस्बीर बलिदानका कीर्तिमान हुन् वा खरानीको थुप्रो ? भविष्यका चिन्ताले सिन्काजस्तै फुकिढल जो संयोगले नमरेका हजारौं कार्यकर्ता जिउँदा लाश हुन् कि जनयुद्धका अमर योद्धा ?
बेलाबेलामा इमेल खोल्छु गम्दै कि कहिले फेरिएला काठमाडौं ठूलाबाको लेख छाप्नेगरी ? अनि उदयजीलाई सोध्छु, ‘ठूलाबालाई कस्तो छ ?’
from Saugat, Nayan Yugbodh
Posted by Nabin Bibhas at 10:13 AM